Madaxda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya oo si wadajir ah usoo saaray Warmurtiyeed [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya oo si wadajir ah usoo saaray Warmurtiyeed [Sawirro]
ADDIS ABABA – Madaxda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa si wadajir ah u soo saaray Warmurtiyeed la xiriira booqasho rasmi ah oo uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay magaalada Addis Ababa.
Warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in ujeedada booqashada Madaxweyne Farmaajo ee dalka Itoobiya ay ahayd mid lagu xoojinayo xiriirka u dhaxeeya labada dal iyadona labada hoggaamiye ay yeesheen wadahadalo miro dhalay ayna labada dhinac isku aragti ka noqdeen arrimaha caalamka.
Qodobada kale ee ugu muhiimsan ee ku qoran Warmurtiyeedka ayaa waxaa kamid ah
In labada dal in si xor ah dhaqdhaqaa ganacsi uu dhex maro
Dowladda Itoobiya oo soo dhaweysay qorshaha dowladda Soomaaliya ee lagu xoojinayo amniga iyo sii xoojinta dagaalada ururka Al-Shabaab.
Labada dal oo isku aragti ka noqday sidii loo xoojin lahaa dhismaha ciidamada Soomaaliya loona diyaariyo in amaanka dalka kala wareegaan AMISOM.
In la xoojiyo ciidamada Booliska isla markaana la kordhito la dagaalanka burcadbadeed kasoo cusboonaatay xeebaha Soomaaliya.
In Iskaashi laga yeesho sidii abaaraha looga hortagi lahaa.
In shirka London uu noqdo mid ay Soomaalidu leedahay iyo qodobo kale.
Booqashada Farmaajo ayaa noqoneysa tii ugu horeysay ee uu ku taco dalka Itoobiya ,isagoo Madaxweyne ah,waana safarkiisii 6aad ee uu dalka uga ambabaxo tan iyo markii xilka loo doortay Madaxweynaha horaantii bishan.